Pipal | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Fandinihana ny antony nahatonga ny fitomboan'ny Benjamin Benjamin
Ny Benjamin Ficus dia akorandriaka (na hazo) amin'ny faka sy ny fianakaviana Mulberry. Ny Ficus dia manavaka azy amin'ny fomba tsy maotina ary afaka mitombo ao an-trano toy ny trano trano. Izy io dia mamela mora sy mamela tanteraka ny atin'ny trano na trano. Nefa, na dia tsy mendri-piderana aza dia mila fikarakarana tsara ny fika.
Ny aretina voalohany amin'ny zavamaniry fingotra, inona no tokony hatao raha marary ny ficus
Ao anatin'ny toe-javatra iainana voajanahary, ny famokarana fingotra vita amin'ny fingotra dia zavamaniry tsy hita isa miaraka amin'ny satroboninahitra manitra izay mahatratra 50 metatra. Mivoatra any amin'ny tany mafana izy ireo any amin'ny faritra malalaka any atsimon'i Indonezia, Azia tropika, ary atsinanan'i India. Interesting! Tamin'ny taonjato faha-19, navoaka tao amin'ny ranom-boasary io fingotra voajanahary io.
Mpankafy aloka ho an'ny trano sy ny birao
Maro ny olona te hamboatra ny efitrano misy voninkazo. Tsy mora foana anefa ny manamboatra efitrano maizimaizina: mila mitady zavamaniry toy izany ianao mba hahafahanao mametraka azy ireo. Amin'ity tranga ity dia ny volom-borona mavitrika indrindra amin'ity lahatsoratra ity ihany no hanao. Adiantum Adiantum dia an'ny Genus Adiant ary faran 'ny vanim-potoana maharitra.
10-ka ilaina amin'ny indostrian'ny indostria misy sary sy famaritana
Ny voninkazo vita amin'ny voninkazo dia tsy vitan'ny hoe fanampim-panazavana amin'ny fanorenana ny efitranonao, fa koa ny zavatra mahasoa. Ireo zavamaniry ireo dia mamorona rivotra mahafinaritra ho an'ny tranonao, manampy ny loko any anatiny ary mankafizo ny maso amin'ny fotoana rehetra amin'ny taona. Ny tombony manokana dia ireo voninkazo izay afaka mahasoa ny fahasalaman'ny olombelona.
Fomba ahoana no hikarakarana tsara ny ficus Abidjan ao an-trano?
Ficus Abidjan (Ficus Abidjan) - iray amin'ireo zavamaniry indostrialy mahazatra, izay efa ela no nahazo ny fitiavan'ny mpamboly. Mahafinaritra tokoa ny ao amin'ny trano sy ao amin'ny birao, manamboatra ilay efitrano ary manome azy kely fotsiny. Ho an'ity zavamaniry ity dia faly ireo tompony isan-taona, mila mahafantatra tsara ny fomba hikarakarana tsara azy.
Fanonganam-panjakana mety amin'ny trano
Benjamin Ficus dia hita any amin'ny trano rehetra misy toeram-pambolena indostrialy. Maro amin'ireo tia ny tanimboly no ankafizin'ny hatsaran-tarehiny sy ny fikarakarana fikarakarana. Saingy tsy ny mpamokarana rehetra no mahafantatra raha azo atao ny manafoana sy mamolavola ity zavamaniry ity. Fikus dia zavamaniry efa ela, izay ny halavany, miaraka amin'ny fikarakarana sahaza, dia tsy mihoatra ny 2 metatra.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Pipal